Etazonia: Miomana Hiala NBA Amin’ny taona 2014 Ny Kaomisera David Stern · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2012 0:59 GMT
David Stern, iray tamin'ireo mpitantan-draharaha ela niasana indrindra teo amin'ny sehatry ny fanatanjahatena no nanambara fa hiala amin'ny filohan'ny ligin'ny tontolon'ny basikety malaza indrindra manerantany, dia ny NBA (National Basketball Association). Andro vitsivitsy monja mialoha ny taom-pilalaovana 2012-13, ny 31 Oktobra 2012, no nanaovana ity filazana ity. Indro misy horonantsary ny filazana fisotron-dronono eto amin'ny Youtube-n'ny ESPN .
Nitatitra izany tahaka izao i Faniq
Nanambara i David Stern fa hiato amin'ny asany maha-mpitantan-draharahan'ny NBA azy amin'ny 1 Febroary 2014. Misy dikany lehibe ny daty satria manamarika ny faha-30 taona nidiran'i Stern tao amin'ny NBA.Niteny (tamin'ireo tompony) aho fa hahafinaritra izany hanohy 15 volana vaovao izany”, hoy i Stern. Te-hieritreritra aho fa nanao izay mety tamin'ny asa nataoko. Fa iray amin'ny zavatra tsara indrindra nataoko ny nanome mpandimby. Tsy ho aiza tsy ho aiza aho amin'ity 15 volana manaraka ity fa hanao izay hampahafinaritra indrindra ny tetezamita.”
Namoaka lahatsoratra lava dia lava momba ny lova navelan'i David Stern ny The Triangle blog(bilaogy telozoro) ao amin'ny Grantland.com
Anjaran'ny olona hafa, ao anatin'izany ireo izay niara-niasa taminy sy nanohitra azy nandritra ny taompolo in-telo nisesy, ny mitsara ny lova navelan'i Stern. Somary tia mandidididy ihany izy, sady manana ilay toetrany malaza mahatonga ny mpiasan'ny ligy haka sisiny. Manana saina tia mamorona ihany koa izy ary manana vina izay manaiky milaza ny harenany, rehefa tsara fipetraka ny fanontaniana, tamin'ny nandraisany ny asa tamin'ny 1984, fotoana nametrahan'i Larry Bird sy Magic Johnson ny fandefasana ny lalaon'ny ligy [amin'ny fahitalavitra] avy amin'ny lalao efa noraketina (en differé) ho lasa any amin'ny fotoana be mpanaraka indrindra, sy fotoana nanombohan'i Michael Jordan sy ny Nike nisandratra ho any amin'ny laza tsy mbola nisy nahatratra mihitsy hatramin'izay ary mety manova ny fanatanjahatena mandrakizay. Hiompana amin'ny fitantarana momba an'i Stern ny 15 volana, ary hanome voninahitra azy ny NBA ho toy ny mpiandraiki-draharaha nahavita nifampiraharaha tamin'ny goavamben'ny fahitalavitra goavambe mammouth, nahazo ny maha-zava-dehibe ny haino aman-jery, nahasahy nandray fanapahan-kevitra nahomby ( ny Dream Team) sy tsy dia mandaitra loatra (fanitarana ny NBA hatrany Shina) mba hampariahana ny lalao manerana ny tany, ary niasa hatrany tamin'ny fametrahana an-tsaina ny tombontsoan'ny Ligy – sy ireo tompony -. Ampahany iray hafa amin'izany lova izany: nitari-dalana tamin'ny fomba fametrahana rafitra fanaramàna farany ambony izy sy ny sendikàn'ny mpilalao, izay efa iraisana amin'ny taranjam-panatanjahantena hafa amin'izao fotoana izao, ary mifandray amin'ny karaman'ny mpilalao ao anatin'ny vola raisin'ny ligy ka mametra ny fandanian'ny isaky ny ekipa.
Nanana hafatra kely momba ny fotoana nitondran'i Stern ny NBA ihany koa ny RantSports:
Nanambara ny drafitrany hiala ny 1 Febroary 2014 i Stern tamin'ny alarobia – izay mitontona kisendrasendra tao anatin'ny faha-30 taona nandraisany ny asa maha-mpiandraiki-draharaha [kaomisera] azy. Rehefa tonga ny fotoana, hanome ny lakile ho an'ny mpiandraiki-draharaha lefitra ankehitriny Adam Silver i Stern.
Mifangaro ny fahatsapana momba ny fialan'i Stern sartia izy no karazan'ny mpiandraiki-draharaha nahazo dera mitovy isa amin'ny tsikera rehefa nandray ny asany izy. Raha nitana andraikitra lehibe i Stern tamin'ny fampivelarana ny NBA nandritra ny taona 80 sy 90 sy ny basikety nanerana izao tontolo izao, dia nandray anjara ihany koa i Stern nandritra ny taom-pilalaovana roa naato antenatenan-dalana noho ny lockout [fikatonana mialoha] ary vao tamin'ny herintaona ny farany rehefa nandresy tanteraka ny Hafanana [tsy fifankahazoan-kevitra?].
Oadray aza adinointsika ny olana momba an'i Tim Donaghy sy ny fanafintohinana nataon'ny mpitsara amantarana raha misy na tsia ny lalao maromaro natao hahazoambola tamin'ny filokana.
Na tianao izy na tsia, azo antoka ny hitenenana fa lava loatra ny fotoana nitantanan'i Stern ny NBA azy ary tokony hahaliana ny mijery izay ataony mandritra ny 15 volana farany iasany.
Sekou's Smith Hang-time Blog ao amin'ny NBA.com nilaza ihany koa momba ny ‘voahosotra’ handimby an'i David Stern, dia ny Kaomisera Lefitra Adam Silver:
Silver, 50 taona, mpanatanteraka tao amin'ny NBA nandritra ny 20 taona ary ny mpiandraiki-draharaha lefitra hatramin'ny jolay 2006. Taorian'ny herinandro vitsivitsy fifampiresahana,antenaina hifidy ny Filan-kevitry ny Governora amin'ny Aprily izay hametraka an'i Silver ho mpiandraiki-draharaha fahadimy teo amin'ny tantaran'ny ligy, handimby an'i Maurice Podoloff (1947 – 1963), i J. Walter Kennedy (1963-1975), i Larry O'Brien (1975-84) ary i Stern.
Ankehitriny ny “mpiandraiki-draharaha voafidy” Stern miteny amin'i Silver, izay mipetraka eo anilany nandritra ny fivoriana fampitam-baovao: “Mieritreritra aho fa tsy misy isalasalana ny hahatsiarovana anao ho [kaomisera] mendrika indrindra hatramin'izay. Nametraka ny lasitra ianao, tsy amin'ny indostrian'ny fanatanjahatena ihany fa amin'ny Filoha Tale Jeneraly rehetra.”
Nantsoin'i Stern ho “mpanatanteraka ny tontolon'ny afera” i Silver ary niteny, rehefa eritreretiny ho mpandimby azy efa taona maro izay, fa “hifaly tsy hisy tahaka izany” raha ankatoavin'ny Filankevitry ny governora [mpitantana] tsy nisy nitsipaka i Silver.
Nahatratra fenitra tsara manerana izao tontolo izao ny fankafizana taranja basikety, ary tsy isalasalana fa nanampy mba hanatrarana izany tanjona izany i David Stern tao anatin'ny 30 taona nanompoany, efa nasehony ny lova lehibe havelany.